गर्लफ्रेण्डलाई लिएर फुटबल हेर्न गएका थिए, श्रीमतीले टिभीमा लाइभ देखेपछि… – Life Nepali
ती व्यक्तिलाई रत्तिभर पत्तो थिएन कि खेल लाइभ कभर गरिरहेका क्यामेराले उनको यो हर्कत पनि कभर गरिरहेका थिए । उनीहरुको ह’र्कत स्टे’डियममा ज’डित ठूला क्रिनसँसै टिभीमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको थियो । जब देवेइलाई मह’सुस भयो कि उनको भि’डियो लाइभ भइरहेको छ, उनी सचेत भए । तर, त्यतिबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । उनकी श्री’मतीले घरमा बसेर टिभीमा यही खेल हे’रिरहेकी थिइन् जसले देवेइको चर्तिकला पनि देखिसकेकी थिइन् ।
देवेइको हर्कत देखेपछि उनकी श्रीमती घर छा’डेर गइन् । यो भि’डियो इक्वे’डरसहित वि’श्वभर भा’इरल भइरहेको छ । भिडियो भाइरल भएपछि र श्रीमती घर छाडेर गएपछि देवेइले इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक रुपमा एक पोस्ट लेखेर आफ्नो ग’ल्तीको लागि मा’फी मा’ग्दै श्री’मतीलाई घर फ’र्कन आ’ग्रह गरेका छन् । भि’डियो भा’इरल भएपछि र आ’फूमा’थि व्य’ङग्य हुन थालेपछि उनले मा’निसबाट नै ग’ल्ती हुने भन्दै मा’निसहरुलाई यो मु’द्दा छा’ड्न आ’ग्रह गरेका छन् ।
Previous साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस”
Next अ’स्ट्रेलिया का’ण्ड’की यु’वतीका आ’फन्त खो’ज्दै नेपाल प्रहरी !
यी म’हिला , सेनाको कार्यालय अघिको स’डकमै कि,न सु,तिन् !
बिहेकै दिन बेहुली छतबाट ख,सेर ढा,ड भाँ,चियो, बिहे गर्न आएका बेहुलाले अस्पतालकै बेडमा सिन्दुर भरे
म एकैछिन मा सुइ लायर निस्किन्छु है बस दिदी भन्दै भित्र गयकी बहिनी रुदै बाहिर